Ndị na-ahụ maka ịnweta na ndị na - eweta ya - Accesslọ ọrụ njikwa ngwa ngwa China
WS6000-M500P6 Intelligent Integrated Ikuku njikwa
WS6000-M500P6 bụ njikwa njikwa ọtụtụ-ọrụ nke jikọtara nyocha, njikwa ntanetị na njikwa akara ikuku, na-egosipụta njikwa dị mfe, ndozi dị mfe, nnukwu ikike na arụmọrụ dị elu. Emebere ya maka netwọkụ pere mpe na ọkara, nwere ike ijikwa ihe ruru 512 (AP). Site na ihu igwe ohuru ohuru ohuru na uzo okike, WS6000-M500P6 di mfe iji rụọ ọrụ ma dịkwa mfe ilekọta ma tinye, nke nwere ike imeju afọ nke ndị ahịa ...
DCWS-6028-C Smart Access njikwa
DCN DCWS-6028-C bụ ọgbọ ọhụrụ nke njikwa arụmọrụ dị elu 10G nwere ọgụgụ isi. Ezubere ya maka ọgbọ ọhụụ nke netwọk ikuku na-agba ọsọ ọsọ, ọ nwere ike ijikwa ihe ruru 256 wireless nweta ohere (AP) ma dabara adaba maka obere ikuku na ọkara. DCWS-6028-C na-ejikọta njikwa njikwa njikwa, njikwa RF zuru oke na usoro nchekwa, ibu QoS na ịgagharị na-enweghị ntụpọ, na-enye ọrụ njikwa nnweta WLAN dị ike. DCWS-6028-C nwere full oyi akwa 3 isi mgba ọkụ fun ...
DCWS-6028 (R2) Wired na Ikuku Integrated Smart Access njikwa
DCWS-6028 (R2) bụ onye na - ahụ maka njiri mara ikuku (AC) dị elu maka netwọị ikuku na - ajụ, nke nwere ike ijikwa ruo ebe nweta 1024 (AP). Ọ na-enye njikwa njikwa RF na usoro nchekwa zuru oke, QoS dị ike, ịgagharị na njikwa zuru oke nke AP, enwere ike iji wuo netwọkụ dị obere maka ogige, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, wdg. ASIC, DCWS-6028 (R2) ) nwere ike ịkwado ntụgharị ọnụọgụ nke IPv4 / IPv6 ngwugwu data ma kwado usoro ntụgharị ike ...